Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Malta » Fanamafisana ny dia mahaliana amin'ny toetrandro mankany aotra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Fitsangatsanganana toetrandro any Zero
Miaraka amin'i Eoropa amin'ny maha-mpitarika manerantany ny Travel & fizahan-tany, dia nanambara fandraisana andraikitra roa ny SUNx Malta mba hanampiana ny famerenana amin'ny laoniny ny areti-mandringana any amin'ny faritra ary hamaly ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana Guterres miantso ny fizahan-tany fizahan-tany rehetra mba ho maharitra sy ho tia namana.
SUNx Malta dia miasa mba hanamafisana ny hetsika toetrandro eropeana.
Voalohany dia Memorandum of Understanding SDG 17 miaraka amin'ny Vaomiera Mpandehandeha Eoropeana (ETC), misolo tena ny National Tourism Organisations (NTO) any Eropa, hiara-miasa amin'ny fananganana drafitra stratejika ho an'ny mpikambana ETC.
Izany dia hanampy azy ireo hametraka ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana maharitra an'i Eropa ho toerana fizahan-tany.
Ho tafiditra ao koa ny fiaraha-miasa manokana amin'ny alàlan'ny Ny fisoratana anarana momba ny toetrandro SUNx momba ny fizotran'ny toetr'andro 2050 ho an'ny Ampio ny NTO Eoropeanina hampandroso ny paikadim-panorenan'ny toetrandro.
Faharoa dia ny fanendrena ny "Iraky ny toetr'andro mahery - ho an'i Eropa" hanamafisana ny fifantohana amin'ireo politika, lalàna ary andrim-panjakana mivoatra haingana ao amin'ny faritra ary hanampy ireo vondrom-piarahamonina Travel sy fizahan-tany sy orinasa hifandray tsara amin'ny CFT Registry. Cinzia De Marzo, izay vao notendrena ho masoivohon'ny toetrandro ao amin'ny EU, dia mpisolovava iray efa za-draharaha, izay niasa tao anatin'ny Vaomiera eropeana ho mpisolovava, tompon'andraikitra amin'ny Fizahan-tany momba ny fizahan-tany Eoropeana (ETIS) izay mitondra fahalalana sy fahaizana manokana ny toerana. Amin'ny anjara asany vaovao dia hiara-hiasa akaiky amin'ireo andrim-panjakan'i EU izy hanohana ny Green Deal amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Hampiarahany amin'ireo mpiray antoka Eoropeana miaraka amin'ny Registra SUNx Malta CFT, izay mifanaraka amin'ny UNFCCC, sy ny Tompondakan'ny toetrandro matanjaka nahazo diplaoma, hanamafisana kokoa Fandaharam-potoana momba ny fitsangatsanganana an-tserasera.
Ny filoham-pirenena Geoffrey Lipman SUNx filoham-pirenena Malta dia nilaza fa: "Faly izahay manambara ity fifantohana vaovao any Eropa ity, ho iray amin'ireo mpitarika fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena manerantany. Zava-dehibe indrindra ny hanohanantsika ny ETC izay manana fitarihana lava amin'ny fampitomboana ny sehatry ny sehatra. Cinzia dia mitondra tanjaka fanampiny manan-danja amin'ny herin-tsinay. ”
Eduardo Santander, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny ETC dia nilaza fa: "Ny fanalefahana ny fiovan'ny toetr'andro dia iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny mpikambana ETC amin'ny ampahany amin'ny fanarenana maitso sy maharitra ny sehatry ny fizahantany aorian'ny COVID-19. Faly izahay miara-miasa SUNx Malta ary mino fa ny fisoratana anarana momba ny fizahantany momba ny toetr'andro dia fitaovana ara-potoana sy ilaina hanohanana ireo NTO eropeana hahatratra ny tanjon'izy ireo maharitra maharitra. ”
SUNx Malta dia tsy mitady tombony, fikambanana miorina amin'ny vondrona eropeana, iaraha-miasa amin'ny governemanta Malta izay namorona rafitra tsy manam-paharoa sy mora vidy hanampiana ireo orinasan'ny Travel & fizahan-tany sy ny vondrom-piarahamonina hiova amin'ny Toekarena Vaovao momba ny toetrandro. Ny SUNx Malta "Green & Clean, Climate Friendly Travel System" dia mifantoka amin'ny Action and Education - manohana ireo orinasa sy vondrom-piarahamonina ankehitriny hanatanteraka ny ambin'izy ireo ary manentana ireo tanora mpitarika rahampitso hiomana amin'ny asa mahafa-po manerana ny sehatra.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny asa fanaovan-gazety, sary, na handaminana tafatafa miaraka amin'ny Profesora Lipman, mifandraisa amin'i Olly Wheatcroft, Program Manager SUNx Malta ao amin'ny: [email voaaro]